Khadadka Duulimaadka ee Delta: Booqashada cusub ee caalamiga ah ayaa kor u kacday 450 boqolkiiba
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Khadadka Duulimaadka ee Delta: Booqashada cusub ee caalamiga ah ayaa kor u kacday 450 boqolkiiba
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Ed Bastian, Madaxa Delta Air Lines
Dib u furista Mareykanka waxay si togan u saamaysaa macaamiisha 33 wadan oo aduunka ah, iyadoo Delta ay u adeegto 10 ka mid ah kuwan aan joogsiga lahayn iyo in ka badan iyada oo loo sii marayo xarumaha caalamiga ah ee xidhiidhka la leh la-hawlgalayaasheeda.
Lines Delta Air Lines waxay aragtay koror 450% ah ballan-qaadyada caalamiga ah marka loo eego lixdii toddobaad ee ka horreeyay ku dhawaaqista dib u furitaanka Mareykanka.
Duulimaadyo badan oo caalami ah ayaa la filayaa inay 100% buuxaan Isniinta, Noofambar 8, oo leh mugga rakaabka oo sarreeya toddobaadyada soo socda oo dhan.
Baahida xooggani waxay ka muuqataa labadaba wakhtiga firaaqada iyo kuwa ganacsiga ee u socdaalaya meelaha caanka ah sida New York, Atlanta, Los Angeles, Boston iyo Orlando.
Lixdii usbuuc ee ugu dambeysay tan iyo markii Mareykanka dib loo furay, Delta waxay aragtay koror 450% ah boosaska iibka caalamiga ah marka loo eego lixdii toddobaad ee ka hor ku dhawaaqista. Duulimaadyo badan oo caalami ah ayaa la filayaa inay 100% buuxaan Isniinta, Noofambar 8, oo leh mugga rakaabka oo sarreeya toddobaadyada soo socda oo dhan.
Dib u furista ayaa si togan u saamaysa macaamiisha 33 wadan oo aduunka ah, iyadoo Delta ay u adeegto 10 ka mid ah kuwan aan joogsiga lahayn iyo in ka badan iyada oo loo sii marayo xarumaha caalamiga ah ee xidhiidhka la leh la-hawlgalayaasheeda, oo ay ku jiraan Air France, KLM iyo Virgin Atlantic. Baahida xooggani waxay ka muuqataa labadaba wakhtiga firaaqada iyo kuwa ganacsiga ee u socdaalaya meelaha caanka ah sida New York, Atlanta, Los Angeles, Boston iyo Orlando. Isku soo wada duuboo, shirkadu waxay samayn doontaa 139 duullimaad oo ka kala imanaya 55 goobood oo caalami ah oo ku yaal 38 waddan oo ka soo degi doonta Maraykanka 8-da Nofembar, iyada oo bixisa in ka badan 25,000 oo kursi.
"Tani waa bilawga waa cusub oo socdaalka iyo dad badan oo adduunka ah oo aan awoodin inay arkaan kuwa ay jecel yihiin ku dhawaad ​​laba sano," ayuu yidhi. Ed Bastian, maamulaha guud ee Delta.
"Inkastoo aan aragnay wadamo badan oo dib u furaya xuduudahooda booqdayaasha Mareykanka xagaagii, macaamiisheena caalamiga ah ma aysan awoodin inay nala duulaan ama booqdaan Mareykanka Dhammaan isbeddelladaas hadda. Waxaan uga mahadcelineynaa dowladda Mareykanka qaadista xayiraadaha safarka waxaana rajeyneynaa inaan dib u mideyno qoysaska, asxaabta iyo asxaabta maalmaha iyo toddobaadyada soo socda."
Duulimaadka DL106 ee ka imanaya Sao Paulo kuna socda Atlanta waxay noqon doontaa duullimaadki ugu horreeyay ee caalami ah ee Delta si ay u taabato US sida waafaqsan xeerarka cusub Isniinta 09:35 iyada oo daraasiin aad uga dhow yihiin.
Marka ay soo noqoto kalsoonida macaamiishu ee safarka, Delta Air Lines ayaa sii kordhaya duulimaadyada ka imaanaya magaalooyinka muhiimka ah ee Yurub oo ay ku jiraan London-Boston, Detroit iyo New York-JFK, Amsterdam-Boston, Dublin-New York-JFK, Frankfurt-New York-JFK iyo Munich-Atlanta.
Atlanta, Gegida dayuuradaha ee magaalada Delta, ayaa weli ah xudunta caalamiga ah ee ugu mashquulka badan oo leh 56 bixitaan maalinle ah oo lagu tago 39 goobood oo caalami ah. Waxaa ku xigta magaalada ugu booqashada badan Mareykanka, New York-JFK, taasoo leh 28 bixitaan maalinle ah oo loo tago 21 magaalo oo caalami ah.
Dib u furista heerka sare waxay kor u qaadaysaa dhaqaalaha caalamka iyadoo isla mar ahaantaana la calaamadinayo bilowga soo kabashada ganacsiga caalamiga ah ee Delta. Shirkaddu waxay soo warisay xagaagan in ganacsigeeda madadaalada gudaha ee Maraykanku uu mar hore dib ugu soo laabtay heerarka 2019, laakiin xannibaadaha xuduudaha ee socda ayaa ka hortagay soo kabashada macnaha leh ee adduunka oo dhan. Socdaalka caalamiga ah ee Mareykanka wuxuu ku tabarucay $234 bilyan dakhliga dhoofinta dhaqaalaha Mareykanka, wuxuu soo saaray ganacsi dheeri ah $51 bilyan wuxuuna si toos ah u taageeray 1.2 milyan oo shaqo Mareykan ah sanadka 2019.
Muwaadiniinta ajnabiga ah waxaa loo ogolaan doonaa inay soo galaan Mareykanka iyagoo wata cadeynta tallaalka iyo baaritaanka xun ee COVID-19 ee la qaadayo seddex maalmood gudahooda markay dhoofayaan. Muwaadiniinta ajnabiga ah ee aan la tallaalin waxay soo geli karaan Mareykanka kaliya haddii ay buuxiyaan shuruudaha ka reebanaanshaha aadka u xaddidan oo ay go'aansadaan baaritaanka imaatinka ka dib, karantiil iyo tallaal. Macaamiishu waa inay sidoo kale bixiyaan faahfaahin si ay u buuxiyaan shuruudaha raadinta xiriirka Mareykanka.
Dhammaan macaamiisha 2 iyo wixii ka weyn waa inay xidhaan maro daboolan inta safarka lagu jiro, halka tallaabooyinka nadaafadda ee Delta ee la xoojiyay ay sidoo kale sii jiraan. Kuwaas waxaa ka mid ah nadiifinta joogtada ah iyo nadiifinta meelaha taabashada sare leh ee diyaaradda iyo garoomada diyaaradaha, iyo sidoo kale ku buufinta korantada ee gudaha diyaaradda oo leh jeermis heer sare ah si loo hubiyo in aan dusha sare aan la dareemin.